Ngwá Ngwá Agha Ngwá Frared Flexible China Manufacturer
Nkọwa:Ngwongwo nke infrared kpochapu,Ngwongwo ala nke infrared,Ngwá Agha Ngwá Agha
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Sistem Na-ekpocha Ụlọ Ala Seram > Ngwá Ngwá Agha Ngwá Frared Flexible
Anyị omenala mere Mgbanwe Ft Infrared Heating Film bụ imewe n'ihi na n'ụlọ, ụlọ ọrụ, n'ebe ọ bụla ọ dị mkpa kpo oku usoro eji dị kpo oku ngwọta na oyi. Na - ejikọta ihe ngwọta ọhụụ nke ihe nkiri ikpo ọkụ nke infrared, ọ gosipụtara na teknụzụ a dị mma, nke a pụrụ ịdabere na ike ya ma nwee okpomọkụ nke achọrọ dị n'ime minit 30. Ọ bụ nnukwu arụmọrụ, nchebe, ahụike, nchịkwa onwe onye ihe nkiri ọkụkụ. Site na ngwa ngwa, ọ dị mfe ịwụnye. Igwe kpochapu nke ọma ka dịkwa mma n'ahụ anyị. Site na redio nke infrared na-ebute n'ahụ mmadụ, ọ nwere ike ịgbasa arịa ọbara, mee ka ahụ dịkwuo elu nke mmadụ ma meziwanye mmetụta nke usoro mgbasa ozi. E mepụtara ngwaahịa anyị iji zute CERoHS, Ul, ETL, ụkpụrụ. Ogo na-edozi n'ezie. OEM ọrụ dị.
Ngwongwo nke infrared kpochapu Ngwongwo ala nke infrared Ngwá Agha Ngwá Agha Ngwongwo Ngwongwo nke infrared nke ukwuu Ngwongwo ọkpọ infrared Ngwongwo Na-ekpochapu Ul Ngwongwo ihe mgbochi infrared Ngwurugwu Infrared Na-ekpocha akwa